URuiYi ungumhlinzeki oqeqeshiwe nomkhiqizi we-aluminium alloy plate eChina futhi sisebenzisana nefektri edumile ye-aluminium elwela ukusindisa amakhasimende ethu emikhakheni ehlukene. Ifektri yethu yasungulwa ngo-1997, manje inkampani inesisebenzi esiphelele esingaphezu kuka-4000, kufaka phakathi abasebenzi bezobuchwepheshe abangaphezu kuka-300.
Umkhiqizi, Umenzeli, Umthengisi Wangaphandle, Inkampani Yokuhweba, Umthengisi
ENyakatho Melika, eNingizimu Melika, eNtshonalanga Yurophu, eMpumalanga Yurophu, eMpumalanga Asia, e-Southeast Asia, Middle East, e-Afrika, e-Oceania, Emhlabeni jikelele
Ukuze ube yisixazululo esihle se-One-Stop ku-Aluminium Metal Supply eChina.
Sizibophezela ukuhlinzeka ngemikhiqizo ye-Aluminium esezingeni lomhlaba. Akukho okubaluleke kakhulu kithi ukweneliseka kwakho okuphelele enkonzweni yethu nasemkhiqizo onekhwalithi ehlukile, ukukhula okuqhubekayo, amathuba, nobudlelwano obuzuzisayo.
Xiaoxian RuiYi Commerce Trade Co., Limited ubelokhu egxile phezulu izinga aluminium ingxubevange izinto ngaphezu kweminyaka engu-10 e-China. Siqale njengomsebenzi omncane, kepha manje sesingomunye wabahlinzeki abahamba phambili embonini ye-aluminium eChina.
Inqolobane enkulu yokuqinisekisa ikhwalithi
Kusukela ku-oda elibekwe ekuthunyelweni okuphumayo, ukuhlolwa kwekhwalithi emithathu kwenziwa ukuqinisekisa ukuthi isilinganiso esifanelekayo semikhiqizo eqediwe singaphezu kwe-100%. Sineqoqo elikhulu, futhi singahlinzeka amakhasimende ngosizo olwanele ukuze amakhasimende angakhathazeki ngenkinga yokuphela kwesitoko nokushoda kwesitoko.
Ukulethwa ngesikhathi esifanele nokonga izindleko
Siyathembisa ukuthi ngemuva kokuthi ikhasimende lifake i-oda, imikhiqizo yendawo izothunyelwa ngosuku olufanayo. I-Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd. ihlinzeka ngobuqotho ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, futhi inikeza amakhasimende imikhiqizo egculisayo.
Isipiliyoni sesevisi esifakiwe
Siyathembisa ukuthi inkampani yethu izolandela yonke imiyalo ngesikhathi ukuze kuqinisekiswe ukuthi amakhasimende angazithola izimpahla ngokuphepha, alalele imibono neziphakamiso zawo ngokuqhubekayo, futhi acabange ngezinkinga zethu. Vumela amakhasimende azizwe ekhululekile.
I-Aluminium Alloys igcina ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo kuyo yonke inqubo yokukhiqiza. Kusukela ekulethweni kwe-ingot nesihlabathi kuya kusheke lokugcina, kunakwa kakhulu yonke imikhiqizo njengoba kuchaziwe ngamashidi wokulawulwa kwenqubo yemfuneko ngayinye yokusakaza.
Izinsizakusebenza zekhwalithi zifaka i-mass spectrometry yokuhlaziywa kwensimbi, i-SPC yokulawulwa kwesihlabathi, ukuhlolwa komzimba, ukungena kwedayi, i-x-ray, ukuhlolwa kwengcindezi kanye nokuhlolwa kobukhulu bobuchwepheshe. Uhlelo olubanzi lokugcina amarekhodi luhlanganisa idatha yokulandeleka okuphelele. Izinhlelo zezwe zokulawulwa kokukhiqizwa kwamakhompiyutha zihlinzeka ngezibuyekezo zansuku zonke zokukhiqizwa kwesimo ezivumela ukuhanjiswa ngesikhathi esifanele.
I-Aluminium Alloys iyaqhubeka nokuzinikela kwayo ngekhwalithi ngohlelo oluqhubekayo lokuhlinzeka ngenqubo kanye nokwenza ngcono inqubo ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende zesikhathi esizayo, ikakhulukazi kuzicelo ezinzima.